KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Daawo: Isbadal ku yimid Muqdisho xiliga Habeenkii ah
Thursday 13 December 2012 06:57
Daawo: Isbadal ku yimid Muqdisho xiliga Habeenkii ah
Muqdisho (KON) - Wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa xiliyada habeenkii ah waxaa lagu arkaa askar ka tirsan dowlada Somaaliya kuwaasi oo sugaya amaanka.
Ciidamadaan ayaa waxay joogaan inta badan wadooyinka magaalada waxaana dadka ay waydiinayaan halka ay u socdaan iyo waliba aqoonsiyada ay wataan dadka wadooyinka isticmaalaya xiliyada habeenkii ah.
Talaabadaan ayaa waxay qayb ka qaadanaysaa sugida amaanka magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, iyadoona ay talaabadaan ay soo dhoweeyeen dadka shacab ah.
Waxaa haatan la arkayaa gawaari badan iyo waliba dadweyne xiliyada habeenkii ah magaalada dhex maraya taas oo ka turjubaysa amaanka magaalada Muqdishi inuu yahay mid soo hagaagaya.
Talaabadaan ayaa ah mid ku cusub magaalada Muqdisho iyadoona markii hore dadweynaha iyo waliba askarta ay kala cabsanjireen taasi oo keeni jirtay in magaalada ay noqoto mid xili hore lagu kala xaroodo.
Halkaan ka Daawo Sawiradda @RadioMuqdisho